တောရှောက်ခါးသီး / ရွက်( သို.) ရှောက်ဘီလူး/ရွက် ( Kaffir Lime ) ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
တောရှောက်ခါးသီး / ရွက်( သို.) ရှောက်ဘီလူး/ရွက် ( Kaffir Lime )
Tuesday, April 15, 2014 Taunzalat
ကျွန်တော့်..မိဘ ၊ညီအစ်ကို ၊ မောင်နှစ်မများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်း
ကျွန်တော်တို.က အထက်ပါခေါင်းစဉ်မှာဖော်ပြခဲ့သလို ခေါ်ဆိုကြပေမယ့်
English လို Kaffir Lime လို.လူသိများပြီး...အများစု( ရုက္ခဗေဒ ) အရ
Citrus Hystrix ဖြစ်ပါတယ်...။
ထိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွေဖြစ်ပြီး..ပာင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အဖြစ်အသုံးအများဆုံး
နိူင်ငံကတော့...ထိုင်း၊ အင်ဒို၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိူင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်...။
အရွက်နဲ. အသီးရဲ.အခွံတွေကို ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိူင်ငံတွေက..အများဆုံး
က..အကျီ င်္ အစွန်းအထင်းတွေနဲ. ဆံပင်ကိုပိုမိုနက်မှောင်တောက်ပစေတယ်
နောက်ဆုံးဝေမျှချင်တာက..တောရှောက်ခါးရွက်/ သီး / အရည်ပာာ..ပာင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်သာမကပဲ..ကျန်းမာရေးနဲ.အလှအပရေးရာကိုများစွာ